သောသီခို: တနင်္သာရီမြို့နယ်တွင် အစိုးရတပ်နှင့်ကေအန်ယူ တိုက်ပွဲဖြစ်၊ ၂ ဦး သေဆုံး
မင်းတို့ဘထွေးတွေကို မင်းတို့ နယ်မြေများများလာခိုင်း။ နည်းသေးတယ်။ ကိုယ့်ဒေသ ကိုယ့်နယ်မြေတောထဲမှာ နေတဲ့ ရဲဘော်တွေအတွက် တော့ လှုံခြုံမှုဘာမှမရှိတော့ဘူး။ ထောထဲမှာ ပြောင်းဖူးလေးချိူးစားတာတောင် အသက်ချမ်းသာမရဘူး။ ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော် သွားသွားနေတဲ့ သူတွေက စဘိုင်းစဘိုင်း.
KNU army soldiers march to commemorate the 63rd anniversary of Karen Revolution Day at Oo Kray Kee Townshipပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန် ၁၃ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက အစိုးရစစ်တပ်က ခမရ ၅၅၂ တပ်ဟာ တနင်္သာရီမြိုနယ် မြောက် ဘက်မှာ ရှိတဲ့ ကေအန်ယူတပ်ရင်း ၁၁ အနီး လှုပ်ရှားသွား လာရင်း ပြောင်းဖူးချိုးပြန် လာတဲ့ ကေအန် ယူတပ်သားတွေကို စတင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ ကေအန်ယူရဲ့ မြိတ်-ထားဝယ်ခရိုင် တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောအယ်နာက ပြောပါတယ်။
Mu Tu Say Po and Kwe Htoo Win don,t care about that both are fuck leader and make money for their self!
fuck leader mu tu say po n kwe htoo win make money for their self
တိုင်းမှူးကိုအကြောင်းကြားလဲ စစ်ဆေးမယ် ဖြေရှင်းမယ်၊ ဘယ်ဘက်ကမှားလဲ စစ်ဆေးမယ်၊ အရေးယူပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားပြန်လာမှာ အဲဒါက ဗမာစကားပုံထဲက ““ ခွေးပါးစပ်က နတ်စကားထွက်သည့်နယ်.”” လို့ခေါ်တယ် သိကြတယ်မလား
Kwe Htoo Win is asshole. Are you broke?. How much many did you get from SPDC for selling two of Karen soldiers. Didn't you think for their family, relatives, and our Karen people?.
God Love Karen said...
စုံစမ်းစရာမလိုဘာဘူး၊စုံစမ်းလဲဘာမှမထူးဘူး၊ သွားစုံစမ်းလိုက်ရင် နအဖ (နွားအဖေ) တွေရဲ့ ဟိုဘန်းပြဒီဘန်းပြနဲ့ရုံသာ
ခွေးအခေါင်းရှောင်တွေကခေါင်းညှိတ်ရုံဘဲရှိတယ်၊ခေါင်းမညှိတ်ရင်ရမှမရတော့တာကို၊ အခေါင်းရှောင်တွေကခေါင်းမညှိတ်ရင် သူတို့ဟိုshow ဒီshow သွားလို့မရတော့ဘူလေ၊ အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့သူတွေက သူတို့ရဲ့လူမျိုးမှမဟုတ်တာ၊ မှူအရတော့သူများကျေနပ်အောင်ဘန်းပြပြီးဟိုကလော်ဒီကလော်တော့စစခြင်းလုပ်မှာပေါ့
ကြာလာရင်ကြည့်ပေါ့ ဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး အခေါင်းရှောင်တွေပြောမယ် အဲဒါဟာ လောကဓံရဲ့ ပုံမှန်ပြကွက်ဘ်လို့သူတို့
saw mlartin said...
သေဆုံးသွားတဲ့ စစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့ မိသားစုကိုကောင်းကောင်း စောင့်ရှောက်ပေးပါ ဥက္ကဌကြီး။
The knu team led by Mu Tue Say Poe, met with Thin Sin Gov on 7th March seem to me that you are the enemy of your own people. You all are first class living in Thailand. You have become the abhorrence of the people. It is not better to carry on your work. You are self-seekers. We will be happy to hear you are dead. We don't want your team to decide kare people destiny. We will be slave of thin Sin and you. 22 lay , Jone, and Htwe Mahn Neyei are the key players and master mind of the team. The rest are the chance attackers. Roger is billiner in Mae sariang, thailand. the whole family are free.
People need to be alert for the current situation. If the team try to carry on start findingavolunteer to end them as quickly as possible.
ဘထွေးကျွေးတိုင်းစား ပေးတိုင်းယူတဲ့ မူးတူးစေးဖိုး နှင့်ကွဲထူးဝင်း နောက်ထပ်သေလူထဲမှာ မင်းတို့သားသမီးတွေ မပါစေနဲ.. ပါခဲ့သည်ရှိသော် ယခုအသက်ပေးသွားသည့်ရဲဘော်နှစ်ဦးထက် ငါတို့ဝမ်းနည်းမည်မဟုတ်ပါ. ဂုဏ်ယူမည်မဟုတ်ပါ..
နှာဘူး​စေးဖိုး ​ခွေးမသားကွယ်​ထူးဝင်း သူ​တောင်းစားမန်းငြိမ်း​မောင်​ မ​အေလိုး​ဂျော်​နီ....တို့​ရေ ဒါလားငြိမ်းချမ်း​ရေး ဆိုတာ မင်းတို့​အတွက်​​တော့ သိန်း ၇၀၀ ကို​တောင်​မနှ​မျှောပဲ
ဒင်းတို့ပ​ထွေး နအဖ ကိုအသလွတ်​​ပေး ဒင်းတို့​တွေ ထိုင်းနိုင်​ငံမှာ ယာမကာ​တွေမြိုလို့ဆို့လို့ မ၀
တုံးလုပ်​ မျိုးချစ်​သူရဲ​ကောင်း​ယောင်​​ယောင်​ ​ခွေးသူ​တောင်းစား​ယောင်​​ယောင်​ လီးလာမဖြဲပြနဲ့ ဒင်​တို့သတ္တိမရှိရင်​​ ​​အေး​ဆေး​နေ ငါတို့​တော်​လှန်​​ရေးသမားအသလွတ်​ အသတ်​ခံ​နေရတာ​တော့ လုံးဝမ​ကျေနပ်​ဘူး......
ဂုဏ်​ယူပါတယ်​ ချစ်​ရ​သော​တော်​လှန်​​ရေး ရဲ​ဘော်​ သင်​တို့သည်​ တိုင်း​ပြည်​နှင့်​လူမျိုးအတွက်​
အသက်​​ပေးစ​တေး​နေ​သော အာဇာနည်​ သူရဲ​ကောင်း​တွေပါ ကျန်​ရစ်​သူမိသားစုနှင့်​တကွ ကျွနု​ပ်​တို့အားလုံးဝမ်းနည်းလို့မဆုံးပါ။ စိတ်​ချပါ
နှာဘူး​စေးဖိုး၊ ​ခွေးမသားကွယ်​ထူးဝင်း သူ​တောင်းစားမန်းငြိမ်း​မောင်​ နှနှနှ မ​အေလိုး​ဂျော်​နီတို့​တွေ အ​သေဆိုးနဲ့​သေကို​သေရမည်​ဟု ကျုပ်​ဂတိ​ပေးတယ်​။။။။။